Koontada tababarka shaqsiga: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Posted by Tranquillus | Agoosto 30, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Dhammaan shaqaalaha iyo shaqo-dooneyaasha ka weyn 16 waxay ka faa'iideysan karaan koontada tababarka shaqsiyeed laga bilaabo bilowga noloshooda shaqo illaa hawlgab. Xuquuqdaas waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro nolosha xirfadda. Marka, si loo awoodo inuu raaco tababar la aqoonsan yahay, shaqo-doone wuxuu abaabuli karaa CPF. Raadi wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qalabkan si aad u hubiso jidadka xirfadaha.
Waa maxay koonto tababar shaqsiyeed maxaase loo adeegsadaa?
'CPF' ama si sax ah xisaabta tababarka shaqsiyadeed waa hab kuu saamaxaya inaad horumariso oo aad xirfad-xirfadeed kuhesho. Si kale haddii loo dhigo, xisaabta tababarka shaqsiga ayaa u oggolaaneysa qof kasta oo firfircoon inuu helo xuquuqda tababarka.
Dib u habeynta dhowaan lagu sameeyay tababarka xirfadaha ayaa looga golleeyahay in lagu sugo wadiiqooyinka xirfadaha si looga hortago loona dagaallamo shaqo la'aanta. Waxay ku lug leedahay isbeddelo kala duwan, oo ay ku jiraan koontada tababarka shaqsiyeed. Laga bilaabo 2019, koontada tababarka shaqsiyadeed hadda waa lacag, waxaa lagu xisaabiyaa euro (oo saacadaha dambe laguma sii jiri karo), sababtoo ah:
500 euro sanadkii sanadkii shaqa-waqti-dhiman iyo waqti-buuxa ah, oo lagu xiray 5 euro.
800 euro sanadkii shaqaalaha xariifnimada hoose, oo lagu xiray 8 euro.
CPF: hirgelinta codsi u sahlaya helitaanka tababarka
Sameynta muuqaalka koowaad inta lagu gudajiray qeybtii labaad ee 2019, codsi moobiil ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku iibsato koorsooyinkaaga tababarka si xor ah oo aan faragelin dhinac saddexaad ah. Adeeggan waxaa maamula Caisse des Dépôts. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato xuquuqdaada oo aad ku maamusho feylkaaga wadarta is-maamul, xitaa haddii ay jirto tabarucaad u dhigma
READ Shuruudaha gelitaanka iyo habka fiisada iyo baasaboorka ee Faransiiska
Codsiga, waxaad awoodi doontaa inaad:
Raadi koorasyo ​​tababar la xiriira warshadahaaga;
Awood u yeelo inaad iska diiwaangeliso dhex-dhexaad oo aan lacag ku bixinno khadka tooska ah;
Kala tasho is dhexgalka suuqa shaqada dhamaadka tababarka;
Eeg oo qor faallooyinka cutub kasta oo tababar ah.
Yaa dan ka leh?
Dhammaan shaqaalaha da'doodu tahay 16 iyo wixii ka weyn, iyadoon loo eegin xaaladdooda (shaqaalaha qaybaha gaarka loo leeyahay, shaqo doonka, wakiillada dadweynaha ama kuwa madaxa bannaan iyo kuwa hawlgabka ah). Xuquuqda xisaabaadkaan waa la helay waxaana loo isticmaali karaa noloshaada oo dhan si laguu tababaro, xitaa haddii ay dhacdo isbeddel shirkadeed ama shaqo la'aan.
Maxuu maalgelin karaa CPF?
CPF-kaaga ayaa kaa caawin kara maalgelinta:
Ruqsadda darawalka gawaarida fudud;
Taageerida abuuritaanka meherad;
Helitaanka shahaado ama oggolaansho.
Maxay tahay inaad u tababarto iyo tababbarka aad dooranayso?
Waqtiga raadinta shaqadu waxay noqon kartaa fursad lagu fakaro xirfadahaaga, xirfadahaaga, awoodahaaga. Tani sidoo kale waa fursad lagu casriyeeyo CV-gaaga si loo helo dareenka shaqaaleysiinta.
Ku hadlida Ingiriisiga waa xirfad inta badan ay codsadaan shirkadaha. Xaqiiqdii, dhexgalka caalamiga ee ganacsiga wuxuu saameeyaa dhammaan waaxaha iyo dhammaan jagooyinka, iyada oo aan loo eegin heerka mas'uuliyadda jagooyinka. Hagaajinta xirfadahaaga Ingiriisiga waxay markaa noqon kartaa mid dhab ah oo lagu daray raadintaada shaqo.
14 shirkado iyo ururo adduunka ah ayaa aamminsan tijaabooyinka TOEIC. Waxay u doorteen imtixaanadan inay isku halleyn karaan oo ay isbarbar dhigayaan heerarka Ingiriisiga si ay u taageeraan qoritaankooda iyo go'aamadooda xayeysiinta. Markaa, waxaad si buuxda ugu maalgelin kartaa imtixaanka TOEIC sanduuqaaga CPF.
READ Noocyada kala geddisan ee fasaxa, goorma iyo sidee looga faa'iideysan karaa?
Ma jiraan noocyo kala duwan oo CPF ah?
Jawaabtu waa haa. Inta lagu guda jiro noloshaada shaqada, waxaad baran doontaa 3 nooc oo kala duwan oo ah CPF kuwaas oo kala ah:
CPF iskeed u shaqeysa waa talaabada kaliya ee qofka ay khusayso (in loo isticmaalo saacadaha ka baxsan saacadaha shaqada). Abaabuliddu waa lacag la’aan waxayna u oggolaaneysaa qof walba inuu doorto tababarka ku habboon buug-yaraha goobta laga bixiyo. Codsiga moobiilka, ansaxinta ka horreysa iyo nidaam kale oo maamul looma baahna.
CPF-ga ayaa la dhisay. Tani waa qaab ay wadaagaan loo shaqeeyaha iyo shaqaalihiisa (in loo isticmaalo saacadaha ka baxsan saacadaha shaqada ama inta lagu jiro wakhtiga shaqada). Ujeedada ayaa ah in la dhiso, loo shaqeeye iyo shaqaale, mashruucyo tababareed oo ku saabsan dan guud. Tani waxay u baahan tahay heshiis u dhexeeya labada dhinac iyo sidoo kale abaabul akoonka shaqaalaha ee 'CPF'.
Kala-guurka CPF ee beddelaya fasaxa tababarka shaqsiga (CIF). Dambe waa fasaxa tababarka si looga shaqeeyo xirfadiisa iyadoo maqnaansho la ogolaaday uu ka maqnaa shaqada.
Shaqo doon iyo CPF: Maxay yihiin xuquuqdaadu?
Haddii aad ka diiwaangashan tahay ama aadan ka diiwaangashanayn Pôle Emploi, waxaad xaq u leedahay inaad furato koonto CPF oo ku taal barta moncompteformation.gouv.fr. Waxa kale oo aad tan ku samayn kartaa adoo adeegsanaya barnaamijka mobiilka, oo laga heli karoapp Store et Google Play.
Tababarka la heli karo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho shahaado / shahaado aadna u hesho aqoon iyo xirfado tiro badan.
Si ka duwan shaqaalaha, shaqo-doone ahaan, ma heli kartid xuquuq dheeraad ah muddada aad shaqo la'aanta tahay. Si kastaba ha noqotee, tan micnaheedu maahan inaadan adeegsan karin xuquuqaha aad heshay ilaa iyo hadda.
READ Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato xannibidda
Sideed ugu maalgashadaa tababarkaaga maalgelinta CPF?
Waad abaabuli kartaa xuquuqdaada CPF oo aad bilaabi kartaa tababar muddada aad shaqo la'aanta tahay. Waxaa jira laba fursadood:
Haddii xuquuqdaada aad heshay ay daboosho dhammaan tababarkaaga, mashruucaagu si otomaatig ah ayuu u ansax u yahay. Uma baahnid heshiiska Pôle Emploi heshiiska si aad u bilowdo tababarkaaga.
Haddii xuquuqdaada aad heshay aysan daboolin dhamaan tababarkaada, Pôle Emploi waa inay ansaxiso qorshahaaga tababarka. La-taliyahaaga Pôle Emploi wuxuu markaa mas'uul ka noqon doonaa isku-duwidda “faylka tababarka” iyo raadinta maalgelin dheeraad ah Pôle Emploi. Intaas waxaa sii dheer, Golaha Gobolka ama hay'adaha kale ayaa waliba kaa caawin kara hawshaan.
Xaalad kasta oo aad tahay, shaqo-doone ahaan, waa inaad la xiriirtaa Pôle Emploi haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid CPF-gaaga.
Koontada tababarka shaqsiga: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato Sebtembar 26th, 2020Tranquillus
horeBaro sida loo hubiyo khadkaaga lacagta
socdaU daa bilow bilowga ganacsiga, warqad codsi bilaash ah
Shuruudaha gelitaanka iyo habka fiisada iyo baasaboorka ee Faransiiska
Baro sida loo hubiyo khadkaaga lacagta
Nidaamka caafimaadka Faransiiska: ilaalinta, kharashyada, taageerada
Sharciyada la xiriira darawalnimada iyo baabuur wadidda ee Faransiiska